Inona no atao amin'izao fotoana izao? | Fiaretana haran-dranomasina
Raha ny fiarovana ny tontolo iainana an-dranomasina dia nifantoka ara-tantara tamin'ny fiarovana ny onenana onenana, nitombo ny fangatahana sy ny fahalianana amin'ny famerenana amin'ny laoniny mavitrika. Mba ahazoana topimaso momba ny tetikasa efa misy momba ny fahalalana sy ny famerenana amin'ny laoniny, Boström-Einarsson sy ireo mpiara-miasa aminyref lesona niangona sy namboarina nianarana avy amin'ny fandalinana tranga 329 sy ny famaritana ireo tetik'asa fanarenana ny haran-dranomasina eran'izao tontolo izao avy amin'ny literatiora siantifika nodinihin'ny namana, ny literatiora volondavenona, ny famaritana an-tserasera ary ny fanadihadiana an-tserasera an'ireo mpitsabo amin'ny laoniny. Ity famerenana ity dia mametraka sisintanin'ny fahalalana ankehitriny momba ny fomba famerenana amin'ny laoniny ny haran-dranomasina ary mamaritra ireo faritra hanatsarana ny saha.
Ity ambany ity ny sary an-tsary azonao ampiasaina hanodinana ny voka-pikarohana amin'ity fanadihadihana ity.
Tsindrio ny takelaka etsy ambany raha hijery ny famintinana ny fikarohana sy ny tolo-kevitra.
Ny valin'ny fanadihadihana dia misy ref:
10 Ny karazana fidirana an-tsehatra amin'ny vatohara dia fantatra, miaraka amin'ny famindrana mivantana sy ny fanaovana zaridaina haran-dranomasina no fomba mahazatra indrindra. Ny fidirana an-tsehatra hafa dia misy: haran-dranomasina artifisialy, fanatsarana ny substrate miaraka amin'ny herinaratra, fanamafisana substrate (4%), fanesorana ahidrano, fanatsarana ny lozam-pifamoivoizana ary fizarana bitika.
Tetikasa fanarenana no mitranga ao 52 firenena eran'izao tontolo izao. Ny ankamaroan'ny tetikasa dia notanterahina tany Etazonia, Filipina, Thailand ary Indonezia (miaraka amin'ny 40% amin'ireo tetikasa).
Ny fanadihadiana momba ny tranga famerenana amin'ny laoniny dia anjakan'ny tetikasa fohy, miaraka amin'ny halavan'ny mediana 12volana sy 66% amin'ireo tetikasa mitatitra ny fanaraha-maso 18 volana na latsaka.
Ny ankamaroan'ny tetikasa dia somary madinidinika amin'ny habakabaka, miaraka amin'ny haben'ny medaly ny faritra voaverina amin'ny 500
Karazan-karazany maro no haverina amin'ny laoniny, miaraka amin'ny 221 karazana samy hafa avy amin'ny 89 genera. Ny ankamaroan'ny tetik'asa famerenana amin'ny laoniny (65% amin'ny fandalinana) dia mifantoka amin'ny haran-dranomasina maniry haingana, ary ny karazany dimy voalohany (22% amin'ny fandalinana) dia Acropora cervicornis, Pocillopora damicornis, Stylophora pistillata, Porites cilindrica ary Acropora palmata.
Ny fehin-kevitra avy amin'ny famerenana dia misy ref:
Amin'ny salan'isa, ny fahavelomana vetivety amin'ny haran-dranomasina naverina tamin'ny laoniny dia somary avo. Ireo général coral rehetra misy replika ampy ahafahana mamintina fehin-kevitra (> 10 fanadihadiana lisitra an'io karazana io) dia mitatitra ny fahavelomana antonony eo anelanelan'ny 60-70%.
Ny fahasamihafana amin'ny fivelarana sy ny fitomboana dia karazany sy / na toerana manokana, noho izany ny fisafidianana fomba manokana dia tokony hampifanarahana amin'ny toe-javatra eo an-toerana, ny vidiny, ny fisian'ny fitaovana ary ny tanjona manokana amin'ny tetikasa tsirairay.
Ny tetikasa dia kely sy fohy amin'ny ankapobeny, na izany aza ilaina ny fanamafisana be loatra mba hamerenana amin'ny laoniny ny fitaovana famerenana amin'ny laoniny ny fikirizan'ny haran-dranomasina amin'ny ho avy. Na dia misy porofo marobe manondro ny fomba mahomby amin'ny fananganana vatohara aza amin'ny mizana kely kokoa dia vitsy ny fitsabahana mampiseho ny fahafaha-manalehibe azy mihoatra ny iray hektara (na 10,000 metatra toradroa). Ny fanamarihana miavaka dia misy fomba izay manaparitaka ny olitra haran-dranomasina azo avy amin'ny firaisana.
Ity ambany ity ny lisitr'ireo olana mahazatra sy tolo-kevitra momba ireo tetik'asa famerenana amin'ny laoniny ref. Ny fanalefahana ireo olana ireo dia hanampy amin'ny fampitomboana ny famerenana amin'ny laoniny sy hampitomboana ny fampiasana azy ao anatin'ny rafitra fitantanana miorina amin'ny faharetana.
Mamolavola tanjona mazava ary misokatra amin'ny varavarankely vaovaotanjona - Tetikasa maro no manana tsy fitoviana eo amin'ny tanjona na tanjona voalaza sy ny famolavolana tetikasa ary ny fanaraha-maso ny vokatra. Ny tanjona tsy voatonona na diso tafahoatra loatra dia mety hampidi-doza ireo vondrona mpandray anjara, amin'ny alàlan'ny fampanantenan-tena be loatra sy amin'ny fandefasana azy mavitrika. Ny tanjona ara-tsosialy sy ara-toekarena dia manana lanja voajanahary ary tsy mila miafina amin'ny tanjona ekolojika.
Mitondra tena mety fanaraha-maso - Ny ampahany betsaka amin'ny tetikasa dia tsy manara-maso ny metrika mifandraika amin'ny tanjona sy tanjon'izy ireo voalaza, ary / na tsy manohy manara-maso maharitra ela mba hanomezana tombana ny fahombiazana. Mampiasà metrérica namboarina raha azo atao mba hamelana ny fampitahana eo amin'ny tetikasa.
Tatero ny valin'ny tetikasa - Ny vokatry ny ampahany betsaka amin'ny tetikasa dia tsy voarakitra an-tsoratra, izay mametra ny fizarana fahalalana sy ny fianarana mifanaraka. Zava-dehibe ny fizarana fahombiazana ary koa ny tsy fahombiazana, mba hahafahan'ny hafa mianatra avy amin'ny zavatra niainanao ary tsy manandrana miverimberina fomba tsy mahomby.
tsara drafitra sy famolavolana ny tetikasanao - Noho ny tsy fanaraha-maso sy fitaterana tsy ampy, matetika ny tetik'asa dia mampiasa fomba izay tsy mifanaraka amin'ny faritra sy ny toe-piainany manokana. Ny fizarana fahalalana sy fanatsarana ny torolàlana momba ny famerenana amin'ny laoniny dia manatsara ny olana.
Ny valin'ity fandinihana ity dia asongadin'ny sary etsy ambany.
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoFamerenana amin'ny laoniny - Famerenana amin'ny laoniny ny fahombiazana, ny tsy fahombiazana ary ny lalana ho avy.
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoDatabase famerenana amin'ny laoniny, sary an-tsary ary tatitra.
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoFamerenana amin'ny laoniny amin'ny tontolo miovaova - Famolavolana fomba sy teknika manerantany, tatitra amin'ny National National Science Science Program.manokatra fisie PDF